Narrow Gap Kufukidza Die Series - China Narrow Gap Kuchengeta Die Series Mutengesi, Factory -Jwell
Narrow gap kuputira kufa musoro kunogona kuburitsa yakatetepa chaizvo kupfeka uye kujekesa kupenya kwekupfeka, zvakare kunogona kuita kuti kupfeka kuchengetwe munzvimbo chaiyo yekushushikana, Kusiyana nekupukuta emvura kupfeka pane zvakavakirwa zvinhu, yedu yakamanikana gap kupfeka kufa musoro system ndeye kufa muromo. gaka rakatarisana
yakakura (0.0762 mm) yekumusoro inofa musoro, kuitira kuti iyo yakatetepa inokwana isvike ku1um kubudikidza nemuromo wefa. Panyaya yeiyo mamiriro ukobvu chete mu0.002mm kana 2um, iyo Narrow gap unhani kufa musoro sisitimu inogona kudzora iyo yakafara upamhi hwekugona kugona kushivirira renji yakatenderedza 5%. Isu tinogadzira iyo yekufa miromo yakagadziriswa, saka tinogona kushandisa yekudzora feeler blade kudzora kupfeka kukora uye upamhi. Kupfeka ukobvu kubva pasi pe1um kusvika 254um Musoro wekufa unogona kugadzirisa ese marudzi ekunamira (kusanganisira anonamira anonamira), bhatiri, zvedongo capacitor, yekushongedza pamusoro, yemagetsi
kuratidza yepakati, iyo filtration membrane, pasi, mafuta maseru, rinobva madhaka, zvigadzirwa zvekurapa, mwenje kuramba zvinhu, kumanikidza inonamira yekunamatira tepi, bhatiri rezuva, superconductor, kubvarura bhandi uye hwindo rine firimu, nezvimwe.
HDPE PP Polymer gobvu bhodhi paving rakanyorwa extrusion mutsetse